China K uchungechunge reciprocating amalahle feeder Ukwakha futhi Factory | Izinsiza kusebenza zeChengxin Vibration
I-K-type ephindaphinda i-feeder yamalahle isebenzisa i-crank yokuxhuma induku yokuhudula ipuleti engezansi yama-degree ayi-5 ibheke phansi ukwenza ukunyakaza okuhambisanayo ku-roller, ukuze kukhishwe ngokufana amalahle noma ezinye izinto ezi-granular nezimpuphu ezikhululekile ezinempahla encane yokugaya kanye ne-viscosity encane evela okokusebenza kokudla kokutholwayo.
I-K-type ephindaphinda i-feeder yamalahle isebenzisa indlela yokuxhuma induku yokudonsa ukuhudula ipuleti engezansi lama-degree ayi-5 iye phansi ukwenza ukunyakaza okuhambisanayo ku-roller, ukuze kukhishwe ngokufana amalahle noma ezinye izinto eziyimbumbulu nezimpuphu ezixekethile ngempahla encane yokugaya ne-viscosity encane evela okokusebenza kokudla kokutholwayo. I-K-type feeder feeder ilungele ukuhambisa izinto ngobuningi ezimayini, ezimayini, izitshalo zokulungiselela amalahle, iziteshi zokudlulisa, izingqungquthela zokuphatha amalahle, ama-terminals wempahla yenqwaba, njll. amadivayisi ngokusebenzisa isilo noma ngqo. Qaphela ukuphakelwa okufanayo kwe-ore, amalahle esihlabathi, okusanhlamvu nezinye izinto zokwakha ngobuningi
Le mishini ingondla amalahle ngokulinganayo ngokusebenzisa indawo yamalahle yokuhambisa noma enye imishini yokuhlola, efanelekile embonini yokulungiselela imayini namalahle.
1. Isakhiwo: i-feeder yamalahle yakhiwa ngefaneli, i-reducer, imoto ejwayelekile, ipulatifomu yokudlulisela, indlela yokudlulisa, ipuleti engezansi (ipleyiti yokudla yamalahle), umzimba wokudla wamalahle, i-roller nesango.
2. Isimiso: ngokusebenzisa i-reducer ne-crank yokuxhuma induku, imoto ishayela ipuleti engezansi ukwenza ukunyakaza okuhambisanayo ku-roller, ukuze kuthulwe ngokufanayo izinto eziya ku-conveyor noma eminye imishini yokuhlola.
Kunezinhlobo ezimbili zesakhiwo se-feeder yamalahle: ngesango elilawulayo nangaphandle kokulawulwa kwesango.
Ukukhiqizwa kwesango elilawulayo kungalawulwa yisango, futhi umkhiqizo obhalwe etafuleni elingenhla ukukhiqiza lapho ulungiswa endaweni ephezulu (elingana naleyo ngaphandle kokulawulwa kwesango).
Ukufaka nokusebenzisa i-K-type reciprocating coal feeder (feeder)
1. Ukuphindisela okuphakelayo kwamalahle kulungiswa ngaphansi kokuvulwa komgqomo wesitoreji. Ngaphambi kokufakwa, kuyadingeka ukunquma indawo evundlile, bamba ifreyimu nokuvulwa komgqomo ngamabhawodi, bese ufaka ipulatifomu yokudlulisela endaweni efanele, ushise uhlaka lwe-H ngohlaka kanye nepulatifomu yokudlulisela ngokuqinile, uqondanise futhi ufake isinciphisi nenjini, lungisa kahle, bese ubopha ngamabhawodi.
2. Ngemuva kokufakwa kokuphindisela okuphakelayo kwamalahle, kudingeka ukuthi kungabikho umthwalo wokuhlolwa. Ngesikhathi sokusebenza, hlola ukuthi ngabe zonke izingxenye zisebenza ngokujwayelekile yini, futhi izinga lokushisa eliphakeme lokuphakama kokugoqa ngeke libe ngaphezulu kuka-60 ℃.
3. Lapho ulungisa umkhiqizo ngokuya ngezidingo zokulayisha, khipha umphini wepini engxenyeni yempisi, khipha umuthi, ujikeleze indawo engu- “1,2,3,4 ″ yegobolondo le-crank ukukhetha indawo engaguquki, faka iphini shaft, xhuma i-crank ne-crank shell, qinisa i-pin shaft ne-nut, bese uqala injini ngemuva kokulungiswa.
Ukulungiswa kwansuku zonke nokugcinwa kohlobo lwe-K lokuphindisela okuphakelayo kwamalahle (ukuphindisela okuphakelayo):
1. Ngaphambi kokusebenza kwe-feeder, kufanele kube khona amalahle aluhlaza okwanele embhedeni ukuze kugwenywe ukuthinteka ngqo phansi (ipuleti lokuphakela amalahle) lapho kulayishwa amalahle emgodini.
2. Ngemuva kokusebenza okuqhubekayo njalo ngenyanga, hlola ukuthi izingxenye zomshini zivulekile yini nezinye izinto ezingajwayelekile. Uma kunezimo ezingajwayelekile, zilungise ngokushesha.
3. Ipuleti langaphakathi eliphansi lokuphindisela okuphakelayo kwamalahle ngokuxhumana ngqo namalahle kufanele lilungiswe noma lithathelwe indawo uma ubukhulu balo bungaphezu kwengxenye yobukhulu bokuqala.
Uma izingxenye ezibuyisanayo zingasebenzi ngokujwayelekile izinyanga eziyisithupha, kufanele zishintshwe ngokushesha.
Ukugcinwa kwezingxenye eziyinhloko zokuphindaphinda okuphakelayo kwamalahle:
a. Isinciphisi: hlola njalo ezinyangeni eziyisithupha, bese uhlanza okugoqekayo nebhokisi noma ushintshe uwoyela wokuthambisa.
b. Imoto: ngokuya ngezidingo zesondlo semoto.
Langaphambilini Uchungechunge lwe-HGM lusebenze ukudlidliza kwamalahle
Olandelayo: ZG isixwayisi feeder